पश्चिम नवलपरासीका एक जनामा कोरोना पोजेटिभ | Ekhabar Nepal
स्वास्थ्य बैशाख १० 2077 ekhabarnepal
बुटवल बैशाख ९
पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा गरिएको र्‍यापिड टेस्टमा एक जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।
बर्दघाट नगरपालिका–४ का ७८ वर्षीया वृद्धमा गरिएको र्‍यापिड टेस्टमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पताल परासीका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. मोहम्मद नुरुल होदाले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । उनलाई अहिले बुटवलस्थित कोरोना विषेश अस्पतालको आइसुलेसन अस्पतालमा पठाइएको छ ।
उनको बर्दघाटस्थित चिसापानी अस्पतालमा परीक्षण गरिएको हो । छातिमा समस्या आएपछि उनी अस्पताल पुगेका थिए ।
उनको स्वाब निकालेर थप परीक्षण गर्न भैरहवास्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको डा. होदाले बताए । परीक्षणमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनका सबै परिवारलाई तत्कालै र्‍यापिड टेस्ट गरिएको थियो । उनीहरु सबैको रिपोर्ट नेगेटिभि आएको छ ।
स्वाब निकाल्नका लागि मंगलबार मात्र प्रदेश सरकारले ‘भिटिएम’ पठाएकाले तत्कालै स्वाब संकलन गरेर लैजान सहज भएको डा. होदाले बताए ।
जिल्लामा र्‍यापिड टेस्ट गरिएकामध्ये कोरोना संक्रमण देखिएको यो पहिलो हो । जिल्लामा हालसम्म १ सय ३१ जनाको र्‍यापिड टेस्टबाट परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गौरब ढकालले जानकारी दिए ।